Liistada Suuqgeynta Ganacsiga Yaryar ee 2014 | Martech Zone
Liistada Rabitaanka Suuqgeynta Yaryar ee 2014
Talaado, Disembar 31, 2013 Talaado, Disembar 31, 2013 Douglas Karr
Miyuu 2014 noqon karaa sanadka aan dhammaanteen joojinno cayrsashada walxaha dhalaalaya oo aan ugu laabanno xeeladaha suuq-geynta ee runta ah? Wiil, waxaan rajeynayaa sidaas… waxaan aragnay shirkado badan oo ceyrsanaya qaar ka mid ah isbeddellada waalan dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waqtiga ay miisaaniyaddoodu qallajisay iyadoo aan wax natiijo ah ka soo bixin, taasi waa sababta ay ugu dambeyn noogu yeeri lahaayeen. Waxaa jiray kuwo aad u tiro badan oo la tirin karo waxayna calooshayda u rogtay daawashada qaar ka mid ah shirkadaha tiknoolajiyada iyo wakaaladaha oo si xarago leh u cunaya kana qaadaya lacag badan miisaaniyadaha badan ee ganacsiyada yaryar ee daacadda ah.
Sida laga soo xigtay j2 Sahanka Saadaasha Caalamiga:
28.16% waxay rabaan inay kordhiyaan joogitaankooda internetka, sida sameynta degel ama dukaan internetka ah.
23.61% waxay rabaan inay qaataan emaylka otomatiga suuq geynta si ay si fudud oo hufan ugu gaaraan macaamiisha.
20.52% waxay rabaan inay adeegsadaan emaylka si ay si wax ku ool ah ugu dhiirrigeliyaan gudbinta iyo wadaagga shabakadaha bulshada.
13.76% waxay rabaan in ay hirgeliyaan suuq geynta suuq geynta hababka ugu wanaagsan ee emaylka iyo ku habboonaanta bogga.
11.05% waxay rabaan inay hubiyaan in dadaalkooda suuq geynta e-maylku uusan ku dhamaan shaandhada spam ama tabs Gmail.
Waxaan ahay xiiso leh meesha xeeladaha suuqgeynta fiidiyowga ku jiray daraasadda. Haddii ay jirto wax farqi ah fekerkeyga, waxay noqon laheyd in ganacsiyada yar yar ay hada iska qori karaan dhowr adeeg oo suuq geyn ah oo fiidiyow ah si ay farriintooda uga soo saaraan. Tani waxay ka caawin doontaa inay la tartamaan miisaaniyad aad uga weyn ta ay leeyihiin oo ay guuleystaan.
Tags: Liiska 2014emailJ2 Globalj2 Saadaasha Caalamkaj2 Sahanka Saadaasha CaalamigaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkamarketing mobileganacsiga yaryar
Shaqooyinka Suuqgeynta Fiidiyowga